मकुना कुनै हालतमा मारिने छैन : हात्तीविज्ञ
मुख्य पृष्ठप्रदेश १ समाचार समाजमकुना कुनै हालतमा मारिने छैन : हात्तीविज्ञ
संरक्षणका नाममा विकाउ राजनीति नगरौँ : संरक्षण कार्यकर्ता
विराटनगर / मकुना हात्ती नियन्त्रणका लागि केन्द्रबाट कोसीटप्पु खटिएको हात्तीविज्ञसहितको प्राविधिक टोलीले कुनै हालतमा हात्ती मार्न नदिने बताएको छ ।
‘मकुनालाई आरक्षबाहिर निस्किन नदिन औषधि प्रयोग गरेर मात घटाउने, फाइरिङ गरेर तर्साउने, गस्ती सङ्ख्या र अवधि बढाउने निर्णय भएको छ,’ प्राविधिक टोलीका संयोजक हात्तीविज्ञ अशोक रामले भने, ‘हामी दिन–रात मकुना र बस्तीका बीचमा बार बनेर उभिनेछौँ ।’
अशोक राम हाल खप्तड राष्ट्रिय निकुन्जमा संरक्षण अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् । कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका पूर्व–संरक्षण अधिकृतसमेत रहेका राम जङ्गली हात्तीको व्यवहार विज्ञ मानिन्छन् । सोमबार सुनसरी प्रशासनले कोसी गाउँपालिकाका स्थानीयसँग जसरी भए पनि मकुना नियन्त्रण गर्ने, नसके मार्ने सहमति गरेको थियो । त्यसअघि गत मङ्सिर ३० गते सुनसरी प्रशासन मकुना मार्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । मिडिया तथा सरोकारवालाको चर्को दबाबपछि प्रशासन केही हच्किएको थियो ।
अवैध प्रवेश रोक्न खोजे आरक्ष प्रशासनसँग द्वन्द्व गर्छन् । हात्ती रोक्ने प्रोजेक्टहरूको पैसा कहाँ जान्छ के हुन्छ खोजी गर्दैनन् । अनि कसरी हुन्छ मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको जङ्गली जनावरबाट सुरक्षा ?
त्यसैबीच, सोमबार कोसी गाउँपालिका–५ का १९ वर्षीय मोती कामतको मृत्यु मकुनाकै आक्रमणबाट भएको भन्दै स्थानीय सडक अवरुद्धसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । प्रशासनले स्थानीयसँग १० बुँदे सहमति गरेको थियो ।
सहमतिपछि प्रशासनको आग्रहमा केन्द्रले रामको नेतृत्वमा विशेष प्राविधिक टोली खटाएको हो । टोलीमा यसअघि खटिएका डाक्टर अमित सरौला तथा वन्यजन्तु प्राविधिक तीर्थ लामा छन् ।
प्राविधिक टोली र सुनसरी प्रशासनबीच बुधबार छलफल भएको छ । छलफलमा आरक्षभित्रका जङ्गली जनावर मध्यवर्ती क्षेत्रमा आउनबाट रोक्न मानवीय तथा जैविक उपायहरू सघन बनाउने निर्णय भएको छ ।
सुनसरी प्रशासन र स्थानीयबीच भएको सहमतिका कारण मकुनाको जीवन सङ्कटमा परेकोबारे जिज्ञासा राख्दा हात्तीविज्ञ रामले भने, ‘प्रशासनले के सहमति ग¥यो, कुन अधिकार प्रयोग गरेर सहमति ग¥यो त्यो हामीले टिप्पणी गर्ने विषय भएन । तर हामी मकुना मार्न दिँदैनौँ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय वन्यजन्तु कानुनअनुसार हात्ती मार्न पाइँदैन । मार्न हुँदैन ।’
मकुनाले मान्छे मारेको आरोपसहित राजमार्गमा प्रदर्शन गर्दै कोसी गाउँपालिकाका स्थानीय
मध्यवर्ती क्षेत्रमा संरक्षणसम्बन्धी गतिविधिमा लामो समयदेखि क्रियाशील युचेप नेपालका अध्यक्ष रविन घिमिरे कोसीटप्पुमा हात्ती–नियन्त्रणको विषयलाई राजनीतिक स्वार्थ–सिद्धिको साधन बनाइएको गुनासो गर्छन् । ‘हात्ती समस्या हुँदै होइन, तर हात्तीलाई किन समस्या बनाइएको छ ?,’ घिमिरे भन्छन्, ‘मकुना मार्दैमा मनको सन्तोकबाहेक समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ ?’
कोसीटप्पुमा मकुनाबाहेक एक दर्जनभन्दा बढी जङ्गली हात्ती रहेको उल्लेख गर्दै घिमिरेले सोलार फेन्सी तारसम्बन्धी ठेक्का–पट्टामा भएको भ्रष्टाचार तथा मर्मत सम्भारमा देखिएको व्यवस्थापनसम्बन्धी कमजोरीले अहिले समस्या निम्तिएको बताए ।
हात्ती समस्या हुँदै होइन, तर हात्तीलाई किन समस्या बनाइएको छ ? मकुना मार्दैमा मनको सन्तोकबाहेक समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ ?
जब मध्यवर्ती क्षेत्रका मान्छेलाई थाहा छ आरक्षबाट हात्ती, अर्नालगायत जनावर बस्तीमा आउँछन् । यस्तोमा कोही, किन सुरक्षाका उपाय नअपनाई, एक्लै–दुक्लै हिँड्छन् ? भन्ने जिज्ञासामा घिमिरे भन्छन्, ‘त्यही त म छक्क पर्छु । हात्तीले मान्छे मार्‍यो भनेर मकुना मार्न दबाब दिएको–दियै गरेको सुन्छु । तर मान्छे मारिएको घटनामा गल्ती कसको छ, मकुनाको कि मान्छेको ? त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ ।’
संरक्षणकर्मीहरूका अनुसार मध्यवर्तीका बासिन्दा संरक्षणप्रति गम्भीर छैनन् । आफ्नै जीवनप्रति गम्भीर छैनन् । नेताले त मार्न भनेकै हो तर प्रशासनले मारेन भन्नेखालको स्थानीय बिकाउ राजनीतिका पछाडि लागेका छन् । आफैँ सोलार फेन्सीका लकहरू चोर्छन् । जैविक बारका लागि लगाइएका बाँसलगायत बिरुवा उखेल्छन्, काटेर लान्छन् । आरक्षभित्र गाईबस्तु हुलेर जङ्गली जनावरको बास खजबज्याउँछन् । आरक्षभित्र हात्तीले मनपराउने खानेकुराका बिरुवा रोप्न, हुर्काउन आरक्ष प्रशासनलाई मद्दत गर्दैनन् । अवैध प्रवेश रोक्न खोजे आरक्ष प्रशासनसँग द्वन्द्व गर्छन् । हात्ती रोक्ने प्रोजेक्टहरूको पैसा कहाँ जान्छ के हुन्छ खोजी गर्दैनन् । अनि कसरी हुन्छ मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको जङ्गली जनावरबाट सुरक्षा ?
मकुना तस्बिर : राजेन्द्र पोखरेल
मकुना राजनीति संरक्षण